Madaxweyne Muuse Biixi oo cafis u fidiyay 574 maxbuus oo ku xirnaa xabsiyada Somaliland | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Madaxweyne Muuse Biixi oo cafis u fidiyay 574 maxbuus oo ku xirnaa...
Madaxweyne Muuse Biixi oo cafis u fidiyay 574 maxbuus oo ku xirnaa xabsiyada Somaliland
Hargeysa (Halqaran.com) – Madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi, ayaa wareegto uu Arbacadii maanta soo saaray ku cafiyay Maxaabiis kala duwan oo ku xirnaa xabsiyada Somaliland.
Wareegtada ka soo baxday Xafiiska Madaxweynaha Somaliland ayaa u qorneyd sida hoos ku xusan:
Madaxweynaha Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu wareegto madaxweyne oo summadeedu tahay JSL/XM/WM/222-495/042020, Cafis Guud ugu fidiyey Maxaabiista dembiyada aan aadka u cuslayn ku xukuman ee xabsiyada dalka ku xidhan.
Markaan Arkay: Dastuurka Somaliland, Qodobka 90aad, Xubintiisa 5aad;
In laga bilaabo taariikhda maanta aan Cafis Guud u fidiyo Maxaabiista dembiyada aan aadka u cuslayn ku xukuman ee xabsiyada dalka ku xidhan, oo tiradoodu dhan tahay 574 (Shan Boqol iyo Afar iyo Toddobaatan) maxbuus. Cafiskani saamayn kuma laha xuquuqda madaniga ah iyo raadka ciqaabeed ee ka dhalanaysa dembiyadda ay ku xukunnaayeen, sida ku xusan qodobka 92 ee Xeerka Ciqaabta Guud.
Waxa cafiskan fulinaya Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka, iyada oo la raacayo liiska Maxaabiista iyo shuruudaha Wareegtadan ku lifaaqan.